China Bucket Elevator fanamboarana sy orinasa | Chinatown
Mpamatsy varotra matihanina mampita voa izahay. Ny ascenseur TDTG serivisy premium antsika dia iray amin'ireo vahaolana ara-toekarena indrindra amin'ny fikirakirana vokatra granular na pulverulent. Ny siny dia miorina amin'ny fehikibo mitsangana mba hamindra fitaovana. Ireo fitaovana dia ampidirina ao anaty masinina avy any ambany ary avoaka avy any ambony.
Ity fitaovana andiany ity dia miaraka amina 1600m3 / h ambony indrindra. Ampiasaina be ao amin'ny rafitra fitehirizam-bokatra ho an'ny varimbazaha, vary, voan-javamaniry, ary voamaina hafa. Ho fanampin'izany, azo ampiasaina ho milina fanodinana varimbazaha koa ho an'ny orinasa fanaovana lafarinina, ozinina vary, ozinina vilona, ​​sns.
1. Ity ascenseur varimbazaha ity dia afaka misoroka tsara ny fanangonana vokatra, mampihena ny lozam-pifamoivoizana ary manomboka milamina miaraka amin'ny siny feno ary manaparitaka 1/3 feno voamaina. Ny elevator bucket dia afaka miasa tsy tapaka amin'ny toe-javatra feno.
2. Ny fizarana lohan-doha sy baotin'ny milina dia tsy azo ovaina tanteraka ary nasiana takelaka buffer mahatohitra akanjo azo soloina.
3. Ny varavarana fanaraha-maso dia misy amin'ny lafiny roa amin'ny loha sy ny boot.
4. Ny fehikibo dia farafahakeliny telo sosona vita amin'ny fingotra miaraka amin'ny nylon fa miankina amin'ny fahaizany sy ny haavon'ny ascenseur koa.
5. Ny casings ny ascenseur siny dia napetaka amin'ny fifandraisana flange amin'ny gasket rubber, ary manana ny refy sy ny refy amin'ny refy.
6. Ny pulley rehetra dia mandanjalanja ara-statika sy dinamika, ary rakotra fingotra izy ireo ho an'ny fanoherana avo lenta tsy mihetsika.
7. Ny tadin-tsolika dia ao anaty karazan-tsoroka boribory roa sosona. Vovoka izy ireo ary apetraka ivelan'ny casing.
8. Ny rafitry ny fandraisana dia miorina amin'ny faritra boot an'ny elevator bucket.
9. Mampiasa boaty sy fitaovana maotera avo lenta izahay. Ny boaty fiadiana karazana bevelled dia misy nify mihamafy ary mihidy tanteraka, raha raisina kosa ny teknika fanosorana solika. Ny boaty fiambenana Alemana SEW dia misy hamenoana ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana.
10. Fitaovana fiarovana feno natokana ho an'ny ascenseur siny. Ny vodin-tsolika rambony tsirairay dia ampiarahina amin'ny sensor hafainganam-pandeha ary ny singa any aoriana dia napetraka mba hisorohana ny fehikibo tsy hianjera any aoriana raha misy tsy fahombiazan'ny herinaratra
11. Misy siny vy na siny polimerika.
Karazana Ratio fandefasana Hafainganana (m / s) Fahafahana (t / h)
koba tsara toto vary Lafarinina (r = 0.43) Vary (r = 0,75)